Momba anay - Hebei quangong import and export trade Co., Ltd.
Niorina tamin'ny 2012, Quangong Tools Co., Ltd. (mifototra amin'ny famokarana sy fivarotana rakitra Hebei Quangong Steel Co., ltd) dia mpanamboatra fitaovana matihanina sy fitaovana manimba miaraka amina endrika amam-bika, famokarana fikarohana ary varotra .Fototra 150 tapitrisa tapitrisa ary manana 500 izahay
mpiasa, izay mpanamboatra rakitra vy lehibe any Shina.
Hebei Quangong Steel fisie famokarana sy varotra Co., Ltd natsangana tamin'ny taona 1998, manana teknolojia famokarana mandroso sy fitaovana, ary rafitra fanaraha-maso henjana kalitao, ankamaroan'ny rakitra vy, burrs karbida ary kapila Flap sns.
Manana rafitra fifehezana kalitao sy fitantanana kalitao tonga lafatra sy mpahay siansa izahay ary nahavita fanamarinana ISO 9001: 2000and GS, fanamarinana BSCI. Quangong Tools Co, .ltd dia manana laza tsara eo amin'ny sehatry ny asa mahasosotra ao an-trano sy any ivelany. Tongasoa amin'ny fitsidihanao sy torohevitra tsara fanahy